Gịnị Mere Don't Amaghị Onye M Bụ? | Martech Zone
Friday, April 27, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ọ dị mkpa ịkwalite atụmanya ịzụ ahịa anyị iji hụ na anyị na-enweta ndị ahịa ziri ezi. Ọ bụrụ na anyị banye ndị ahịa na-ezighi ezi, anyị maara ozugbo n'ihi na arụpụta anyị arụghị ọrụ, mmachi nzute na-abawanye, na nkụda mmụọ na-abawanye na mmekọrịta ahụ. Anyị achọghị nke ahụ. Anyị chọrọ ka ndị ahịa ghọta usoro anyị, jiri mmekọrịta anyị kpọrọ ihe ma hụ nsonaazụ anyị na-enweta ha.
N'ehihie a, m ga-eme oku nye otu enyi m na onye otu m, Chad Pollitt na Kuno okike. Chad nwere ezigbo mmekọrịta ya na nnukwu ndị na-ere ahịa anyị na-achọ ịzụta. Na iru blọọgụ anyị, mkpakọrịta chiri anya anyị nwere na ụlọ ọrụ ha, yana ndị ahịa anyị nwere… Enwere m obi ike na ndị isi na ụlọ ọrụ ha ga-enwe ekele maka ịzụ ahịa anyị.
O di nwute, ha nwere usoro inboarding nke choro ka m gwa onye ahia okwu, zaghachi otutu ajuju ajuju, gwa onye isi ochichi, lelee vidiyo ole na ole nke onye njikwa ahu zitere, zaghachi na mpempe akwukwo ihe banyere 50 ajuju… na Chineke maara ihe na-esote.
Ọ̀ bụ na ha amaghị onye m bụ?
Anaghị m ekwu na na ụdị ego nke egocentricric. M na-na-eme ihe n'eziokwu na-enwe nkụda mmụọ na ha n'ezie amaghi onye m bu! Nzukọ ha toro… dịka usoro ha si eme… ma ha nwere ndị na-eme ka ahịa ahịa ha na-amachaghị nke ọma na ha amaghị na m nwere ezigbo aha na aha ọma n'ime ya. Ekwetaghị m na ha wepụtara oge iji lee, ma. Abụ m onye ọzọ na nọmba ahịa ha.
Enwere m nkụda mmụọ n'ihi na m rụsiri ọrụ ike iji mee ka a mata ya na nnukwu ihe m nwere. Abụghị m Steve Jobs… ma n'ime ha obere niche nke ụlọ ọrụ, M mara mma n'aka na m na-egosi na n'elu 25 folks na-aghọta ihe ha na-agbalị iji mezuo, na-ekwu okwu banyere ya, ma na-eso banyere ya. Blog anyị nwere nnukwu iru n'ime ụlọ ọrụ ha, ma ndị na-ere ahịa na ahịa ha amaghị.
Nke a bụ nnukwu ihe atụ nke ire ere usoro na-aga na-ezighị ezi. Ihe mbụ m na - eme ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ kpọtụrụ m maka azụmahịa nwere ike ịga nyocha ha. Mgbe ụfọdụ anyị na-azụ ahịa n'ihi na ha ga-abụ nnukwu ahịa… mana ọtụtụ oge anyị na-azụ ahịa n'ihi na ọ ga-abụ nnukwu ohere nye anyị!
Agaghị m ejupụta na mpempe akwụkwọ. Aga m echere ruo mgbe kọntaktị Chad hụrụ ma ha ga-achọ ịbụ ndị mmekọ na onye isi ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ ga-abụ ihe nkoropụ ma ọ bụrụ na ha emeghị ebe ọ bụ na m nọdụrụ na ngosi ma hụ ngwa ọrụ m nwere ike iji maka ndị ahịa anyị… mana ọ bụrụ na ha ga - achọ itinye m na usoro 42 iji mee ka m kwenye karịa ịghọta onye m bụ, M Amaghị m na m chọrọ ịzụ ahịa na ha.
Ihe ọ bụla azụmahịa na-eme ekwesịghị ịtụba ya na usoro. Usoro dị mma maka igwe, mana ụmụ mmadụ nwere ike iche echiche wee mee mkpebi dị ịtụnanya na-anaghị adaba na usoro. Atụmanya gị abụghị ndenye na mpempe akwụkwọ… ha bụ ezigbo mmadụ. Ikwesiri inwe ndi ozo maka ihe obula ina eme… site na usoro iheomume, na mmefu ego, na itinye ihe ndi ozo. Achọrọ m ka onye ọ bụla n'ime ezigbo atụmanya m ga-adị ka a ga-asị na m ghọtara ndị ha bụ, mere ha ji dị mkpa, na otu anyị nwere ike isi nyere ha aka.
Onye na-ere ahia a kwesiri kwa.
Tags: inbound marketingprequalifytozuo nduNkwado ire ahịausoro ire ere
Mmetụta nke Nyocha Online
Bravo Doug! Adị m ọhụrụ na blọgụ gị wee chọta ozi gị bara ezigbo uru. Ekwenyere m na gị, mgbe ụfọdụ, a ga-edebe bọọlụ ahụ ma ndị ọzọ dị mkpa na-eduzi azụmahịa. oge.
Usoro dị mkpa. Ọ na-enyerekarị onye zụrụ ya na onye rere ya ere. Ma, mgbe ụfọdụ, ọ kwesịrị ka etinye na ihu ọma nke dialog. Akụkụ dị mkpa nke ire ere bụ ịmara mgbe ị ga-esi na usoro a pụọ ​​ma soro ndị mmadụ kpaa.
Ma kweta na 'nyocha dị oke mkpa'. Mara onye ị na-agwa okwu mgbe niile.
Daalụ maka nzaghachi, Douglas. Ga-etinye nzaghachi gị n'ọrụ.
Oge izizi ebe a ma dị mma ịmara banyere gị ebe a. Ihe niile i dere ebe a na-ada oku
ma na-enye ihe ọmụma. Anọ m na-abịa azụ ebe a.
Ma ị na-ekwu maka uto nke azụmaahịa ma ọ bụ naanị ya
mmejuputa iwu ohuru ohuru, ma obu onye nwere mmetụta nke dehumanizing na
ịkọwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ma ọ bụ n'ezie ahịa
Uru onye isi choputara iji mesie mmadu na mmadu ike
mmekọrịta, n'agbanyeghị ogo ụlọ ọrụ na ụdị teknụzụ ọ ma ọ bụ
ọ na-etinye n'ọrụ.
Na m ebe nke ọkachamara ọrụ, ma ọ bụrụ na m na-azụlite a
mmekọrịta gị na onye na-azụ ahịa, ma m na-enye nnukwu ụlọ ọrụ ọrụ
ma ọ bụ obere, m na-a na-agaghị emezu a ire nke ọrụ ndị ahụ. Ọ bụ
dị oke ụkọ na m ga-edejupụta fọm, nye m ajụjụ ọnụ, gbaa ajụjụ ọnụ
wee nweta oru ngo. Ọ bụghị naanị na m na-arụ ọrụ m; ọ na-enwe mgbe niile
banyere mmekọrịta. Maka m, ndị ahịa ọ bụla kwesịrị iche na ị maara onye
ha bụ. Nke ahụ bụ mmekọrịta. Ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọpụta ụzọ ị ga-esi mee
ahịa enwe pụrụ iche, ị na-aga ida azụmahịa.
Carlile Patchen na Murphy LLP